စစ်ကြောင့် အချစ်၊ အချစ်ကြောင့် စစ် – Pann Satt Lann Books
စစ်ကြောင့် အချစ်၊ အချစ်ကြောင့် စစ်
Best Seller စာရေးဆရာ ဆNicholas Sparks ရဲ့ The Lucky One ကို ဆရာတင်မောင်မြင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ အသစ်စက်စက်လက်ရာတစ်ပုဒ်ပါ။ ဆရာက Covid ကာလအတွင်း ဒီစာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြောင့် ယခုအသက် ၈၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာ့ရဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဘာသာပြန်လက်ရာကို ဖတ်ကြရမှာဖြစ်သလို ဆရာ့ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောရရင် ဆရာ့ကလောင်ဟာ ဘယ်တော့မှအိုမင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘဲ အမြဲနုပျိုလန်းဆန်းနေတယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်သလိုပါပဲ။
အခုစာအုပ်မှာ မျိုးရိုး ဂုဏ်အရှိန်အဝါ သုံးပြီးဟောက်စားဟိန်းစား အောက်တန်းကျတတ်တဲ့ ရဲအုပ် ကလေတန်၊ လူလောက်နီးနီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ ခွေးလိမ္မာကြီးဇိုးနဲ့အတူ မိုင်ပေါင်းများစွာခရီးရှည်လျှောက်ရင်း သူ့ဘဝအတွက် ကံကောင်းစေတဲ့ဓာတ်ပုံထဲက မိန်းမချောကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ လိုဂန်ချီဘို၊ သူက အီရတ်စစ်မြေပြင်မှာ အသက်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးက
အံ့ဩစဖွယ် လွတ်မြောက်လာသူ၊ စရိုက်မတူတဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ထူထောင်မိပြီး အဘွားတစ်ယောက်သားတစ်ယောက်နဲ့ ဘဝကိုလျှောက်လှမ်းနေသူ မိန်းမချောကလေး ဘက်တီ၊ ချက်ဆိုရင် နားခွက်ကမီးတောက်အောင်အကင်းပါးတဲ့
အဘွားနာနာ၊ အိမ်ထောင်ကွဲမိဘ နှစ်ပါးကြားမှာ ရှင်သန်ရင်းဖခင်ရဲ့မေတ္တာကို အပြည့်အဝ မရရှာတဲ့ ချာတိတ်လေး ဘင်၊ အီရတ်စစ်မြေပြင်မှ အနိဌာရုံများ၊အတ္တသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကို ရက်ရက်စက်စက်ချွေယူသွားတဲ့မိုးညမုန်တိုင်း….
စတဲ့ စိတ်ဝင်းဖွယ်အဖြစ်အပျက်များနဲ့ လက်ကမချနိုင်အောင် ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်လို့ လက်တို့ပါရစေ။
လင်းလွန်းခင်စာပေ၊၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ (ပ- ကြိမ်)
“စစ်ကြောင့် အချစ်၊ အချစ်ကြောင့် စစ်” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply
တသိမ့်သိမ့်ဒွန် (အတွဲ ၅)
တသိမ့်သိမ့်ဒွန် (အတွဲ ၆)